Njegharị na China - Mba ndị gara ileta na ihe ị ga-eme na ha | Njem zuru oke
China bu obodo no na Owuwa Anyanwu Eshia na otu n’ime onu ogugu ama ama n’uwa. O nwere mpaghara 22, na mgbakwunye na mpaghara ma ọ bụ obodo. Yabụ, ọ bụrụ na anyị gara China, anyị ga-ahụrịrị ihe ụfọdụ dịka Beijing. Obodo na isi obodo nwere ụlọ arụsị na ụlọ elu na echiche na-akpali akpali.
Nnukwu mgbidi nke China bụ ihe ọzọ dị mkpa, ụzọ nke ihe karịrị kilomita 9000, n'agbanyeghị na ị nwere akụkụ nwere ike ịnweta, ebe echiche ga-abụkwa ezigbo ndị enyi gị. Obodo ọzọ ị ga-aga bụ Fenghuang, nke jikọtara okporo ụzọ ndị dị warara, nwee ụlọ elu na mgbidi.
Hong Kong bụ ebe juputara na ọdịiche dịkwa mma ileta. Ọ bụrụ na-amasị gị obodo ọdịnala, mgbe ahụ ịgagharị site na Pingyao na obodo ochie ya nke ị ga-ahụ n'anya, yana anwansi nke Shanghai nke ga-akpọrọ gị gaa na osimiri ya wee nwee akụkụ dị ugbu a nke obodo ahụ.
N’agaghị echezọ ebe ndị mara mma dịka ndị dike nke Xi’an, Great Buddha nke Leshan ma ọ bụ ọgba Yungang na National Parks na ubi osikapa. Nakwa ọtụtụ nkuku ndị ọzọ na-echere gị na China n'ụdị obodo nwere okporo ámá ndị dị warara na ọwa mmiri, dị ka Lijiang na Dali.
Ngwa egwu ndi China
por Daniel eme Ọnwa 5 .
N'ime ogologo akụkọ ihe mere eme nke China, a zụlitewo nkà niile. Egwu ahụ kwa. Ọ dị ka mgbakwunye na ihe niile ...
Na mba ndịda South na East Asia, site na India ruo China, onye na-ajụ mmụọ na-ewu ewu nke ukwuu ...
Osikapa na China
por maruuzen eme Ọnwa 5 .
Ọ bụrụ na anyị na-eche osikapa, anyị na-eche maka China. Rice na China nwere mmekọrịta chiri anya na nke chiri anya. Enweghị obi abụọ…
Nri dị iche iche nke nri ndị China
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka nri, ụtọ, nri na ngwaahịa ndị na-enweghị isi, mgbe ahụ nri ndị China dị na ...
Omenala nwanyi China
por Daniel eme Ọnwa 10 .
N'agbanyeghị ọganihu ndị emere n'afọ iri ndị na-adịbeghị anya, ụmụ nwanyị China nọgidere na-anọ n'ọnọdụ adịghị ike ...
Otu ha si agba ekeresimesi na China
Kedu ka ha si agba ekeresimesi na China? Ajuju a ka anyi nile choro imata banyere ...
TVdị TV kachasị ewu ewu na China
Ọdịdị dị elu nke akara ngosi TV ndị China ama ama na-egosipụta nke ọma nzụlite akụ na ụba ...
Mgbe ụwa chọpụtara na echefula ọtụtụ ihe ịtụnanya oge ochie, oge ...
Mgbe n'afọ 1974, onye ọrụ ugbo aha ya bụ Yang Zhifa malitere igwu olulu mmiri otu awa site na Xi'an, na ...
Esemokwu dị iche n'etiti ụmụ nwanyị China na Japanese
por maruuzen eme 4 afọ .
Nsonaa akara, myirịta ma ọ bụ ntụpọ dị ntakịrị asị ma ọ bụ mmadụ na ọ gaghị ekwe omume ịgbapụ. Onye ọ bụla njem na ...
Ọdịdị ụlọ ndị mgbe ochie China, nka nke osisi na brik
Ọkpụkpọ ndị China, ihe ndị e ji emepụta na usoro imepụta ihe
Fọdụ njirimara ndị China